Taageereyaasha Leicester City Oo 14 Saacadood saf ugu jiray Tigidhka Ciyaaraha Champions League
HomeChampions LeagueTaageereyaasha Leicester City Oo 14 Saacadood saf ugu jiray Tigidhka Ciyaaraha Champions League
Taageereyaasha kooxda Leicester City ayaa faylal dhaadheer u galay in ay goostaan tigidhka ciyaaraha Champions League ee ay kooxdoodu ciyaari doonto.
Taageereyaasha ayaa safaf galay garoonka King Power Stadium dhexdiisa, halkaas oo habeen iyo dheeraad ay ku sugayeen inay helaan tigidhka ay ku daaan doonaan ciyaarta dhex mari doonta naadiga reer Belgium ee Club Brugge marka ay taariikhdu tahay September 14.
Leicester oo ay isku grop yihiin FC Porto, Club Brugge iyo FC Copenhagen, ayaa la aaminsan yahay inay haysato fursad fiican oo ay ugu gudbi karto wareegga 16-ka, maadaama saddexda kooxood ee kula jiraaba jilicsan yihiin.
Rik Lewin oo ah taageere safka ugu horreeya ku jiray oo goostay tigidhka ayaa u sheegay warbaahinta, in aanu sinaba u ogolaan Karin inay dhaafto ciyaarta koowaad ee kooxdiisa ee tartanka Champions League oo markii ugu horreysay taariikhda ka qayb-gelaysa.
“Ma jirto si aan uga baaqankaro ciyaartan, waxaana farxad in aan kooxda la guuleysto oo aan u raaco ciyaaraha Champions League.” Sidaas ayuu yidhi Rik Lewin.
Monaco 1-2 Paris Saint Germain – All Goals & Highlights
Real Madrid 3-0 Atlético Madrid : Daawo Dhacdooyinkii Ciyaarta OO Dhamaystiran
02/05/2017 Abdiwahab Ahmed
Swansea vs Arsenal 3-1 All Goals & Highlights (30/01/2018) HD